အရှယျရောကျလာပီဖွဈတဲ့ တဈဦးတညျးသော သားလေးနဲ့ နားလညျမှုအလှဲလေးတှေ အကွောငျး ရငျဖှငျ့ပွောပွလာတဲ့ ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျ – Shwe Likes
ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျ ဆိုတာနဲ့ပရိ သတျတှခေဈြရ တဲ့နိုငျငံ ကြျောအနုပညာရှ ငျတဈ ယောကျပါ။ ရုပျရှငျလောကမှာရော အဆိုတျောလောက မှာပါအော ငျမွငျမှုတှရေရှိခဲ့ တာပါ။ ဒါကွောငျ့လညျးယနထေိ့အောငျ မွငျမှုတှမြေား စှာနဲ့ပရိသတျတှအေား ပေးနရေ တာပါ။ သူမဟာအခုမှာတော့ခဈြစရာကောငျးတဲ့သားလေးနဲ့အတူ ပြျောရှငျစအခြိနျ လေးတှေ ဖွတျသနျးနတော ပါ။
သားလေးကလ ညျးအရှယျရောကျ လာခြိနျဖွဈတာကွောငျ့ သားနဲ့အမကွေားမှာရှိတဲ့ ခံစားခကျြလေးတှထေိနျးကွော ငျးမှုလေးတှကေိုခုလို ပွောပွခဲ့တာပါ။ သား နဲ့ ကြှနျမ ကွားမှာ ကှာဟမှုလေးတှရှေိနပေါတယျအဖွရှောတော့ အသကျအရှယျ အတှအေ့ကွုံ မတူညီခွငျးက အဓိက ပါ…..
သားက ၁၆ နှဈကမြက ၅၆ နှဈလမေိဘ နရောရောကျလာတော့ သား သမီးအပျေါသူ မှားနေ မှနျနတောလေးတှေ အတှကျ စကားစမွညျ မကွာခဏ ပွောဖွဈရပါတယျ။ သားလကျခံ အဆငျပွတောရှိသလိုသား နားလညျနိုငျစှ မျးမရှိပဲ ငွငျးပယျခံရတာလညျးရှိပါတယျ…သားတို့သငျကွား မှုအတှအေ့ ကွုံအရယုတ်တိမတနျရငျ လကျခံ လမေ့ရှိပါဘူးသားက နူးညံ့ပြော့ ပြောငျး ပမေယျ့သူလကျမခံနိုငျတဲ့ကိ စ်စအတှကျ အလှနျခေါငျးမာပါတယျ
ကမြက ဘာသာတရားရဲ့ အဆုံးအမနဲ့ ကမြ တတျစှမျး သလောကျလေးသားကို သငျကွားလရှေိ့ပါတယျ သားကငယျင ယျကလိုမိဘ ပွောသမြှ မကျြလုံးအဝိုငျးသားနဲ့ နားထောငျလေ့ မရှိတော့ပဲသူ သငျကွားသိမွငျသမြှနဲ့ ကမြ ကိုပွနျမေးခှ နျးထုတျလရှေိ့တယျသူ့ စိတျဝငျစားမှုအတှကျ ကမြ ကနြေပျရပါ တယျတခါတရံလ ညျးသူ့ဆန်ဒနဲ့ ဆနျ့ကငျြတဲ့ ကမြရဲ့ ဆုံးမစကားတခြို့အပျေါရနျလိုတာမြိုးအထိ ကွုံရတတျပါတယျ.( သူ ခံစားနရေတာလေးကို ထညျ့တှကျပေးဖိုလိုတယျ လို့ ကမြ သငျကွား မိပါတယျ )။
ကမြတှေးတယျ ကမြနဲ့သား အကွား ကှာဟမှုကအသိအမွငျlevel မတူကွဘူး level တူတဲ့ ကိစ်စလေးတှမှောလညျးခံစားမှု degree မတူကွပွနျဘူးလကျခံပါတယျလအေခွခေံအကွောငျးတရားတှမှေ မတူကွတာကိုးသဘာဝလက်ခဏာ နဲ့ သာမညလက်ခဏာ အဖွဈ ကမြတို့ ကှဲလှဲနကွေပါတယျ။သဘာဝလက်ခဏာဆိုတာရုပျနာမျတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျလက်ခဏာမြိုးပါဥပမာအမြိုးသမီးနဲ့အမြိုးသား ဆိုပါတော့။
အမြိုးသမီးတှရေဲ့ သဘာဝလက်ခဏာ အားဖွငျ့လှခငျြတယျစိတျနုတယျ၊ခကျြပွုတျခငျြတယျအားငယျတတျတယျမကျြရညျကလြှယျတယျစသဖွငျ့ အမြိုးသမီးတို့ရဲ့ ပငျကိုယျ သဘာဝတှဟောအ မြိုးသမီးတို့ရဲ့ သဘာဝ လက်ခဏာတှပေါပဲအမြိုးသားတှကေတော့အကွမျးခံတယျ ခှနျအားကွီး တယျရှာဖှကြှေေးမှေးလိုတ ယျရငျဆိုငျ ဖွရှေငျးလိုတယျ စသဖွငျ့ အမြိုးသားတို့ရဲ့ အခွခေံသဘောသတ်တိတှဟောလညျး အမြိုးသားတို့ရဲ့သဘာဝလက်ခဏာတှဖွေဈပါတယျ.
သာမညလက်ခဏာဆို တာကတော့အမြိုး သမီးဖွဈစအေမြိုး သားဖွဈစေ အရာရာမမွဲခွငျးအားဖွငျ့ ခရီးဆကျနကွေရတယျဆိုတဲ့ ဘုံတူညီတဲ့ သဘောလက်ခဏာဖွ ဈပါတယျ.သားမှာ သားအသကျအရှယျအရ လိုခငျြတဲ့ အဝတျအစား အသုံးအဆောငျသှားခငျြတဲ့နရောလုပျခငျြတဲ့ကိစ်စသူ့အရှယျအရ ရငျဆိုငျနရေ တဲ့စိမျချေါမှုသူလုပျရမယျ့ အလုပျလေး တှရေဲ့ဖိအားစသညျဖွငျ့ သားရဲ့ပတျဝနျးကငျြက သားအတှကျ အကွီးကွီးဖွဈနတေယျ.ကမြလညျး ကမြအရှယျနဲ့ လိုကျရောညီထှတေဲ့ ဖိအားမြိုးစုံရှိပါတ ယျသို့သျော ကမြက မမွဲတဲ့သဘာဝကို နှလုံးသှငျးနိုငျတဲ့ အရှယျမို့သားလို အကွီးကွီး ဖွဈမနပေါဘူး.
သားက သဘာ ဝလ က်ခဏာတှေ မှာရှာလညျရငျး သငျယူနရေတဲ့ အရှယျကမြ က သာမညလက်ခဏာ နဲ့သားဖွဈနေ တာကို မွငျနိုငျတဲ့ အရှယျပေါ့အခြိနျဆိုတာ အဖွတှေေ အမြားကွီး ထုတျပေးနိုငျပါတ ယျအဲ့ဒီအဖွေ တှထေဲမှာသား ဇောကပျနတေဲ့ ကမြစိတျတှကေိုမမွဲကွောငျးဆငျခွငျရငျးသားလေးကို ကွီးပငျြးဖို့ အခြိနျပေးရမယျ ဆိုတဲ့ အဖွလေညျးပါဝငျပါတယျ…..မိသားစုတိုငျး ပြျောရှငျအောငျမွ ငျနိုငျကွပါစဆေိုပွီးပွောပွခဲ့တာပါ။ credit ; Cele thadin
ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် ဆိုတာနဲ့ပရိ သတ်တွေချစ်ရ တဲ့နိုင်ငံ ကျော်အနုပညာရှ င်တစ် ယောက်ပါ။ ရုပ်ရှင်လောကမှာရော အဆိုတော်လောက မှာပါအော င်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ တာပါ။ ဒါကြောင့်လည်းယနေ့ထိအောင် မြင်မှုတွေများ စွာနဲ့ပရိသတ်တွေအား ပေးနေရ တာပါ။ သူမဟာအခုမှာတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စအချိန် လေးတွေ ဖြတ်သန်းနေတာ ပါ။
သားလေးကလ ည်းအရွယ်ရောက် လာချိန်ဖြစ်တာကြောင့် သားနဲ့အမေကြားမှာရှိတဲ့ ခံစားချက်လေးတွေထိန်းကြော င်းမှုလေးတွေကိုခုလို ပြောပြခဲ့တာပါ။ သား နဲ့ ကျွန်မ ကြားမှာ ကွာဟမှုလေးတွေရှိနေပါတယ်အဖြေရှာတော့ အသက်အရွယ် အတွေ့အကြုံ မတူညီခြင်းက အဓိက ပါ…..
သားက ၁၆ နှစ်ကျမက ၅၆ နှစ်လေမိဘ နေရာရောက်လာတော့ သား သမီးအပေါ်သူ မှားနေ မှန်နေတာလေးတွေ အတွက် စကားစမြည် မကြာခဏ ပြောဖြစ်ရပါတယ်။ သားလက်ခံ အဆင်ပြေတာရှိသလိုသား နားလည်နိုင်စွ မ်းမရှိပဲ ငြင်းပယ်ခံရတာလည်းရှိပါတယ်…သားတို့သင်ကြား မှုအတွေ့အ ကြုံအရယုတ္တိမတန်ရင် လက်ခံ လေ့မရှိပါဘူးသားက နူးညံ့ပျော့ ပျောင်း ပေမယ့်သူလက်မခံနိုင်တဲ့ကိ စ္စအတွက် အလွန်ခေါင်းမာပါတယ်
ကျမက ဘာသာတရားရဲ့ အဆုံးအမနဲ့ ကျမ တတ်စွမ်း သလောက်လေးသားကို သင်ကြားလေ့ရှိပါတယ် သားကငယ်င ယ်ကလိုမိဘ ပြောသမျှ မျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ နားထောင်လေ့ မရှိတော့ပဲသူ သင်ကြားသိမြင်သမျှနဲ့ ကျမ ကိုပြန်မေးခွ န်းထုတ်လေ့ရှိတယ်သူ့ စိတ်ဝင်စားမှုအတွက် ကျမ ကျေနပ်ရပါ တယ်တခါတရံလ ည်းသူ့ဆန္ဒနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ ကျမရဲ့ ဆုံးမစကားတချို့အပေါ်ရန်လိုတာမျိုးအထိ ကြုံရတတ်ပါတယ်.( သူ ခံစားနေရတာလေးကို ထည့်တွက်ပေးဖိုလိုတယ် လို့ ကျမ သင်ကြား မိပါတယ် )။
ကျမတွေးတယ် ကျမနဲ့သား အကြား ကွာဟမှုကအသိအမြင်level မတူကြဘူး level တူတဲ့ ကိစ္စလေးတွေမှာလည်းခံစားမှု degree မတူကြပြန်ဘူးလက်ခံပါတယ်လေအခြေခံအကြောင်းတရားတွေမှ မတူကြတာကိုးသဘာဝလက္ခဏာ နဲ့ သာမညလက္ခဏာ အဖြစ် ကျမတို့ ကွဲလွဲနေကြပါတယ်။သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာရုပ်နာမ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာမျိုးပါဥပမာအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသား ဆိုပါတော့။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သဘာဝလက္ခဏာ အားဖြင့်လှချင်တယ်စိတ်နုတယ်၊ချက်ပြုတ်ချင်တယ်အားငယ်တတ်တယ်မျက်ရည်ကျလွယ်တယ်စသဖြင့် အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ် သဘာဝတွေဟာအ မျိုးသမီးတို့ရဲ့ သဘာဝ လက္ခဏာတွေပါပဲအမျိုးသားတွေကတော့အကြမ်းခံတယ် ခွန်အားကြီး တယ်ရှာဖွေကျွေးမွေးလိုတ ယ်ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းလိုတယ် စသဖြင့် အမျိုးသားတို့ရဲ့ အခြေခံသဘောသတ္တိတွေဟာလည်း အမျိုးသားတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်.
သာမညလက္ခဏာဆို တာကတော့အမျိုး သမီးဖြစ်စေအမျိုး သားဖြစ်စေ အရာရာမမြဲခြင်းအားဖြင့် ခရီးဆက်နေကြရတယ်ဆိုတဲ့ ဘုံတူညီတဲ့ သဘောလက္ခဏာဖြ စ်ပါတယ်.သားမှာ သားအသက်အရွယ်အရ လိုချင်တဲ့ အဝတ်အစား အသုံးအဆောင်သွားချင်တဲ့နေရာလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စသူ့အရွယ်အရ ရင်ဆိုင်နေရ တဲ့စိမ်ခေါ်မှုသူလုပ်ရမယ့် အလုပ်လေး တွေရဲ့ဖိအားစသည်ဖြင့် သားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က သားအတွက် အကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်.ကျမလည်း ကျမအရွယ်နဲ့ လိုက်ရောညီထွေတဲ့ ဖိအားမျိုးစုံရှိပါတ ယ်သို့သော် ကျမက မမြဲတဲ့သဘာဝကို နှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့ အရွယ်မို့သားလို အကြီးကြီး ဖြစ်မနေပါဘူး.
သားက သဘာ ဝလ က္ခဏာတွေ မှာရွာလည်ရင်း သင်ယူနေရတဲ့ အရွယ်ကျမ က သာမညလက္ခဏာ နဲ့သားဖြစ်နေ တာကို မြင်နိုင်တဲ့ အရွယ်ပေါ့အချိန်ဆိုတာ အဖြေတွေ အများကြီး ထုတ်ပေးနိုင်ပါတ ယ်အဲ့ဒီအဖြေ တွေထဲမှာသား ဇောကပ်နေတဲ့ ကျမစိတ်တွေကိုမမြဲကြောင်းဆင်ခြင်ရင်းသားလေးကို ကြီးပျင်းဖို့ အချိန်ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ အဖြေလည်းပါဝင်ပါတယ်…..မိသားစုတိုင်း ပျော်ရွှင်အောင်မြ င်နိုင်ကြပါစေဆိုပြီးပြောပြခဲ့တာပါ။ credit ; Cele thadin
သူမရဲ့ မှေးနပှေဲ့ကို ဟာဝါရီ ကမျးခွမှော ခမျးနားစှာ ကငျြးပခဲ့ကွောငျးကို ပုံလေးတှနှေငျ့တကှ ပရိသတျကွီးအားပွသလာတဲ့ စမိုငျးလျ
ယခုထကျထိ သူမရဲ့ ယုံကွညျခကျြ ရပျတညျခကျြခိုငျခိုငျမာမာ နဲ့ ရပျတညျနတေဲ့ အဆိုတျောဖွူဖွူကြျောသိနျး
ဇနီးခြောလေးနဲ့သားလေးကို ထုတျပွလာတဲ့ တဈခြိနျက အောငျမွငျကြျောကွားခဲ့တဲ့ မငျးသားကွီး ကောငျးခနျ့